allsanaag.com - Shirkii ka Socday Goldogob oo Lasoo Gabagabeeyay
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3211	Days	07	Hours	07	Minutes	00	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Shirkii ka Socday Goldogob oo Lasoo Gabagabeeyay
Written by Shanle	Allsanaag: Goldogob ayaa waxaa si habsami ah ugu soo gabagaboobay shir uga socday beelaha dega gobolka Mudug ee Puntland.Shirka ayaa waxaa ka qeeb galey nabadoonada, isimado, aqoonyahano, iyo waxgaradka ee gobolkaas. Guriga ugaaska ee magaalada Goldogob ayaa shirkaa uu ka furamay; iydoo la sheegay inuu shirka kamadax banaanyahay arrimaha siyaasada. Shirka ayaa waxa uu diirada saaray arrimaha horumarinta iyo nabadgalyada; waxaa furay Islaam Bashiir iyo Ugaas Cali Ugaas Maxamed waxeyna taageereen shirka iyo ujeedadiisa. Shirka ayaa waxa ka horeeyay shirar gooni gooni ah oo ay odayaasha iyo waxgaradka ay isku arkeen. Islaam Bashiir ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu yahay kii koowaad, iyo in la sii wado shirka iyo kuwo kale oo mustaqbalka ah, oo aan la joojin illaa laga gaarayo hadafka iyo ujeedooyinka laga doonayo. Shirka ayaa waxa uu socday muddo labo maalmood ah. Shirkan waxaa fududeeyay oo gacan weyn ka geestay uruka Horn of Afrique Center for Peace. Gabagabadii shirka, waxaa ka soo baxay qodobada ay kamid yihiin:
1.In dhamaan laga wada qeyb qaato lagana wada shaqeeyo illaalinta nabadgalyada gobolka iyo mida guudba,
2.In la iska kaashado nolosha horumarka ummada mida guud iyo midagaarka iyo mida guudba
3.In la illaaliyo dhaqanka wannaagsan ee ku saleysan shareecada islaamka, dhamaana wixii inaga ba’sana loo xaliyo si wadajir iyo walaaltinimo ah,
4.Shirku wuxuu ku baaqayaa is cafis guud iyo isa saamax,
5.Shirka wuxuu ku baaqayaa in shirka la sii wada oo aan la joojin kana uu noqdo kii bilowga ahaa,
6.Shirku wuxuu ku baaqayaa in la iska kaashado hergalinta kaabayaasha dhaqaalaha dhamaantood,
7.Shirka wuxuu ku baaqayaa in dadka shacabka ah ee reer Puntland, gaar ahaan gobolka Mudug, ee qafaalashada loo heesto muddo labo billood ka badan in xoriyadooda loo soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan ayna fududeeyaan cid kasta oo ay quseeso,
8.Shirka wuxuu ku baaqayaa in laga baxo isir takoorka qaar kamid ah beelaha Puntland ee gobolka inala daga loolana dhaqmo si waafaqsan dhaqanka suuban qaar ee inala daga.